Madaxweyne Farmaajo Oo Amray In Baaritaan Lagu Sameeyo Howlgalkii Bariire.
August 26, 2017 - Written by Kulmiye
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya ayaa tacsi u direy Eheladda dadkii lagu laayay deegaanka Bariiire ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Madaxweynaha oo bartiisa soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo dadkii la laayay ayaa sheegay inuu ka tacsiyeynayo dadka lagu laayey weerarkaas ka dhacay subaxnimadii hore ee saakay deegaanka Bariire.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inay dowladda Soomaaliya baaritaan dhab ah ku sameyn doonto wixii dhacay iyo qaabka ay u dhaceyn,islamarkaana ay tahay wax aad loogu xumaado in shacab masaakiin lagu xasuuqay goob ay ku sugnaayeen.
Hadalka madaxweynaha ayaa aad uga duwan hadaladii ay jeediyeen Wasiirada Warfaafinta iyo Gaashaandhigag Soomaaliya C/raxmaan Cumar Cusmaan “Yariisow” C/rashiid C/llaahi Maxamed iyo Sidoo kale Gudoomiyaha gobalka Shabeelaha Hoose kuwaas oo sheegay in waxa la dilay ay ahaayeen Shabaab.
Madaxweynaha ayaa la sheegay in uu la hadlay dadka ay arintaan quseyso isagoo amray in la soo baaro sidii ay wax u dhaceen balse waxa uu sheegay in aad uga xun yahay falkii dhacay ee shacabka lagu xasuuqay.